Black Polka Dots Long Cardigan Long Buddha Trends - Buddhatrends
Asalka Dubka Polka Dotigan
$ 46.90 $ 67.00 Waxaad kaydisaa 30% ($ 20.10)
Hal cabbir / madow
xiritaanka: Furan Fur
Waxyaabaha:Cotton iyo Polyester
mid ka mid size
S **** M. a
tayada cajiibka ah. iibinta maraakiibta xorta ah waxay ahayd mid aad u taxaddar badan. faahfaahin dheeraad ah ee maraakiibta iyo Rapido
Tayada iyo quruxda fiican.
Jasiirada wanaagsan, kaadhka, tayada wanaagsan, seeraha waxaa lagu dhammeeyaa fiicnaan aad u wanaagsan jirka. cabbirka wuxuu u dhigmaa miisaanka cabbirka. na ku saabsan 118 og 120 oo si fiican u fariistay. bixinta dhakhso, mahadsanid!
Jaket tayo wanaagsan leh! Dhamaan seerayaasha waa flat, dumarku ma dhajiyaan. Waxaan u qaaday hooyaday. mabda 'ahaan, farxad, laakiin midab madow. sawirka quruxda madow! waayo xiddigahan la kiraysto ee la kireeyo. gaarsiinta maxaabiista sababo ka mid ah St. Petersburg (17.04 ayaa amar ku bixiyay 25.05 dheer ((
Sheyga wuxuu la kulmayaa tayada soodhada. Waxaan soo jeedinayaa iibiyaha.
A ***** S. a
Marka labaad waxaan iibsanaa tayo qiimo leh Wanaagsan mar kasta hadiyad mahadnaq !!!
E *** P. a
Gowr wanaagsan, markaad rabto "oversayz" ka badan daboolka. Waxaan soo iibsaday dharka qurxinta dukaankan si fiican u sareeya? kaadhkan oo kaliya waa. xaddiga 48-50, sida cabbirka tusaalaha 40 iyo xaasid-caajis ayaa xusuustay xoogaa dhar ah. Waan ku faraxsanahay inaan xirtaa wax aad u macquul ah. mahadsanid!
S ****** G. a
Qodobka ugu muhiimsan ee kaadhadhka miisaaniyada ee Russia (Russia 46) wuxuu si fiican u fariistay dharka, wuxuu u eg yahay maaliyada cufan, wax yar oo leh elastane, oo si fiican u sameysmay, oo si degdeg ah u bixisa, maalmaha 10 ee Moscow laga soo iibsaday meeqa yaryar)). kaarkaagu waa sida kaliya ee aad doonaysay mahadsanid!
O ** K. a
Jasiirada wanaagsan, sida sawirka. kaliya waxay u timid ciriiri xun))
A *** P. a
Xassan weyn waa !!!!!!!! super seller !!!!! Waxaan ku talin lahaa !!!
100% Shukulaatada dhaadheer ee roodhida leh
100% Shukulaatada dhaadheer ee roodhida leh $ 43.40 $ 62.00
Aasiyada Casriga ah ee La Saaray $ 42.00 $ 60.00
Shukriga Sayniska iyo Sayniska $ 42.00 $ 60.00
Shaatiinka Maqalka ah ee Asimmetrical
Shaatiinka Maqalka ah ee Asimmetrical $ 46.90 $ 67.00
Shirkad Jaranjaro ah oo Joogto ah
Shirkad Jaranjaro ah oo Joogto ah $ 47.60 $ 68.00